Tababaraha Barcelona Oo Qirtay In Kooxdiisu Dhibaato Weyn Ku Jirto | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Tababaraha Barcelona Oo Qirtay In Kooxdiisu Dhibaato Weyn Ku Jirto
(08-10-2018) Kaddib barbar-dhacii ay Barcelona la gashay Valencia, waxa u buuxsamay afar ciyaarood oo xidhiidh ah oo horyaalka LaLiga ka tirsan oo aanay guul arag, waxaanay taasi keentay in kaalinta labaad ay u daadegaan xili ay kooxo badan kusoo dhowaadeen.
Gool uu ciyaarta oo laba daqiiqadood oo kaliya socota Valencia u dhaliyey Ezequiel Garay ayaa dhibaato weyn ku noqday Barcelona oo uu barbar dhac u keenay Lionel Messi, hase yeeshee intaa wixii ka dambeeyey labada kooxoodba waxay awoodi kari waayeen inay shabaqa taabtaan.
Tababaraha Valverde oo ciyaarta kaddib warbaahinta la hadlay ayaa soo bandhigay wax kooxdiisa ka khaldan, waxaana uu tibaaxay in sidii caadiga ahayd ay iskugu diyaariyeen ciyaartan balse ay awoodi kari waayeen inay jabiyaan difaaca birta ah ee isku duuban.
“Kooxdu waxay la tagtay garoonka maskaxdii aanu marka horeba lahaan jirnay ee sidoo kale afartii maalmood ee horeba aanu la shir tagnay, markii ay bilaabantay ee ay laba daqiiqo socotay ayaa gool la naga dhaliyey, ciyaartuna way na dafirtay.” Sidaas ayuu yidhi Valverde.
Tababarahan oo uu saaran yahay cadaadis waxa uu tibaaxay in mar kasta Barcelona lagaga horreeyo goolal, ayna yihiin sidii kuwo ka hor tegaya mowjadaha badda hase yeeshee ay isbeddel samayn doonaan.
Ernesto Valverde waxa uu ku dooday in ciyaartooyadiisu ay nasteen afar maalmood oo kaliya balse Valencia ay shan cisho nasanaysay, taasina ay fursad u ahayd kooxda kasoo horjeedda, kuwaas oo uu xusay inay heleen laba illaa saddex fursadood oo ay goolal kale ku dhalin karayeen ka hor intii aanay maamulka ciyaartu usoo gacan gelin kooxdiisa.
“Waa run in aanu ciyaarnay afar maalmood ka hor, iyaguna shan maalmood ka hor. Marka kooxdu ay dib kuugu fadhiisato ee ay si fiican oo wada-jir ahna isku difaacdo, way adag tahay. Waxay sugayeen inay helaan khalad ay difaacayagu sameeyaan, waana adagaal adag inaad hesho sidii aad ku hallin lahayd.” Ayuu mar kale yidhi Valverde.